Tuesday October 11, 2016 - 05:36:50 in Wararka by Super Admin
Afhayeen u hadlay Ciidamada Gumeysiga Sahyuuniyadda ayaa sheegay in weerarka toogashada ah uu fuliyay Nin dhallinyaro ah oo Filastiini ah oo kasoo jeeda Xaafadda Salwaan ee magaalada Al-Qudus, wuxuuna tilmaamay in Ciidamada Bileyska ay markii dambe toogasho ku dileen Ninka weerarkaas geystay.
Xarakada Xammaas ee ka talisa Jiidda Gaza ayaa sheegatay mas’uuliyadda howl-galka ka dhacay magaalada Al-Qudus, iyadoona sheegtay in weerarka uu fuliyay mid ka mid ah dagaal yahanadooda oo lagu magacabo Misbaax Abuu Subeyx.
Bayaan kasoo baxay Ururka Xamaas ayaa waxaa lagu sheegay in howl-galka ka dhacay bariga magaalada Al-Qudus inuu qeyb ka yahay kacdoonka ay wadaan dadweynaha Filastiiniyiinta ee ay kaga dhiidhinayaan gumeysiga Sahyuuniyadda iyo tacadiyaatka ka dhanka ah Masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyo goobaha kale ee Muqadasaatka ah ee kuyaalla magaalada Al-Qudus.
Telefinka Al-Aqsaa ee ku hadla Afka Xarakada Xammaas ayaa baahiyay dar daaran uu jeediyay Ninkii fuliyay weerarkii hubeysanaa ee ka dhacay magaalada Al-Qudus, waxaana Misxaab Abuu Subeyx uu Muuqaalkaasi ku sheegay in weerarkiisa uu ku difaacayo Masjidka Al-Aqsa ee tacaddiyada ay kula kacayaan dadka Yahuudda ah.
Tan iyo bishii October ee Sannadkii 2015-kii waxaa deegaannada kala duwan ee ay dagaan dadka Filastiiniyiinta ah ka dhacay howlgallo kaligii duulnimo ah oo ay fuliyeen dhallinyaro Filastiiniyiin ah, iyadoona howl-galladaasi lagu laayay tobaneeyo ka tiran dadka Yahuudda ee xoogga lagu dejiyay dhulka ay leeyihiin Muslimiinta reer Filastiin.